၂၀၂၁ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်တောင်အာဖရိကရှိစျေးအသက်သာဆုံးတက္ကသိုလ် ၃ ခု
2022 နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများ နိုင်ငံခြားအခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာပါ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေနှင့်ရန်ပုံငွေများ
တောင်အာဖရိကရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ထိပ်တန်းအသက်သာဆုံးတက္ကသိုလ် ၃ ခု
မတ်လ 1, 2022 SAN
ဤတွင်တောင်အာဖရိကရှိအနိမ့်ဆုံးတက္ကသိုလ်များ၊ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများနှင့်နေထိုင်သောတောင်အာဖရိကကျောင်းသားများအတွက်ဖွင့်လှစ်သောမဟာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများဖြစ်သည်။ ဤတက္ကသိုလ်များသည်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှကျောင်းသားများရှိသည်။
အခုရပ်တည်နေတဲ့အတိုင်း Rhodes တက္ကသိုလ် တောင်အာဖရိကတွင်လက်ရှိနှင့်အမှန်တကယ်ပင်၎င်းသည်စျေးအပေါဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများကိုလက်ခံသည်။ တောင်အာဖရိကတွင်လေ့လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကောင်းသည်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျသူတို့ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးကိုဖြတ်သန်းရန်မလိုပါ လေ့လာရန်လိုအပ်ချက်များ.
ငါပြင်းထန်စွာအပေါ်ရေးထားပြီ အနိမ့်ကျူရှင်တက္ကသိုလ်များ တကယ်တော့ဒီဟာကတူညီတဲ့တန်ဖိုးကိုရနေချိန်မှာပိုပြီးငွေစုဆောင်းဖို့နည်းလမ်းပါ။
ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည်နိုင်ငံခြားမှစျေးပေါသောတက္ကသိုလ်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ၎င်းမှာအခြားလူကြိုက်များသောတက္ကသိုလ်များနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်၊ သူတို့ကကျောင်းလခအခကြေးငွေဖြင့်ခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်နိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်အာဖရိကမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ဆုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်။ တချို့ပညာသင်ဆုတွေကများများစားစားမရှိသလောက်ပဲပေးရမယ်။ ခန့်မှန်းခြေဘာမျှ
ဒါ့အပြင်တောင်အာဖရိကရှိစျေးပေါတဲ့တက္ကသိုလ်များလည်းရှိပြီး၊ ဤဆောင်းပါး၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေချိန်ကအနိမ့်ဆုံးကတော့ Rhodes University ဖြစ်သည်။
Rhodes University သည်တောင်အာဖရိကတွင်အနိမ့်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးကျူရှင်အခကြေးငွေမှာ R29,200 ($ 2174) မှ R50,700 ($ 3775) ဖြစ်သည်။ ကနေဒါလိုလူကြိုက်များတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတက္ကသိုလ်တွေကဒီလောက်စျေးပေါလို့မရဘူး။
ကနေဒါရှိဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိရှိသောတက္ကသိုလ်များသည်ကျူရှင်အတွက်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ အထိတိုးချဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်မျှသာသာလျှင် ၃ ခုသာရှိသည်။ သင်စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဤနေရာတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ကနေဒါနိမ့်ကျသောကျူရှင်တက္ကသိုလ်များ.
မြောက်အမေရိကအဘိဓါန် West တက္ကသိုလ်
ဒီတက္ကသိုလ်ကတစ်ခုပါ အာဖရိကရှိရှေးအကျဆုံးတက္ကသိုလ်များ! ၎င်းကို ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင်ကျောင်းသားခုနစ်ထောင်ကျော်ရှိသည်။ ဒီအာဖရိကတက္ကသိုလ်မှာဌာန ၆ ခုရှိတယ် - ဆေးဆိုင်၊ - ပညာရေး၊ - သိပ္ပံပညာ၊ - ဥပဒေ၊ - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ - လူ့ဘောင်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ Rhodes သည်တောင်အာဖရိကတွင်အသက်သာဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ကျူရှင်အခကြေးငွေနည်းသော်လည်းတောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မကြာမီအချိန်တွင်တောင်အာဖရိကတွင်ပညာသင်ရန်စီစဉ်နေပါက Rhodes သည်သင်ကြည့်သင့်သည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Rhodes တက္ကသိုလ် အခကြေးငွေနှစ်ခုအခြေခံအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ ပထမအခကြေးငွေမှာကျူရှင်အခကြေးငွေဖြစ်ပြီး R29,200 ($ 2174) မှ R50,700 ($ 3.775) ။
ဒီငွေပေးချေမှုသည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ နေထိုင်ရန်ခကိုလည်း R51,900 ($ 3864) မှ R54,500 ($ 4058) အထိပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေး R4,400 ($ 328) ကုန်ကျသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းကျောင်းသားများအတွက်အနိမ့်ဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်အနောက်မြောက်တက္ကသိုလ်မှကျူရှင်ကြေးသည် ၃၁၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၃၁၃) မှ ၄၇၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၃၅၀၇) အထိကျသင့်သည်။
North-West တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာသည် R500 (ဒေါ်လာ ၃၇) ခန့်သာရှိပြီးနေရာတိုင်းတွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ဤအခကြေးငွေကိုတစ်ကြိမ်ပေးချေခြင်းမရှိသောကြောင့် ၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင်တစ်ကြိမ်သာပေးချေသည်။
တက္ကသိုလ်၌နေထိုင်ရန်နေထိုင်ခွင့်ခကိုလည်းသင်ပေးရမည်။ ဤသည်တစ်နိုင်ငံလုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီးအထူးကျောင်းသားများမှလွဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကသူတို့အိမ်ရှင်နိုင်ငံ၌ဤအခကြေးငွေပေးဆောင်ရသည်။
သင်သည်အခန်းတစ်ခန်းအတွက် R17,630 (ဒေါ်လာ ၁၃၁၅) နှင့်တစ်ခန်းတည်းအတွက် R1315 ($ 18,280) ၀ န်းကျင်အတွက်ဘတ်ဂျက်လိုအပ်သည်။
University of Cape Town တက္ကသိုလ်သည်တောင်အာဖရိကရှိဈေးအပေါဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအာဖရိကရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cape Town တက္ကသိုလ်၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှငွေပေးချေမှုစာရင်းအရသိရသည်။
အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည် R90,000 (ဒေါ်လာ ၆၇၁၆) ၀ န်းကျင်နှင့် Master's အစီအစဉ်အတွက် R6716 (ဒေါ်လာ ၄၄၇၈) ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ နေထိုင်စရိတ် R60,000 ($ 4478) ကိုလည်းသင်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ဟာဒီတက္ကသိုလ်မှာပါရဂူဘွဲ့ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Master's Degree Fee ပေါင်း R3,750 ($ 279) ကိုသင်အပြည့်အဝပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံး - တောင်အာဖရိကရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်စျေးပေါသောတက္ကသိုလ်များ
ဤတွင်ဖော်ပြထားသောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်တောင်အာဖရိကရှိဤစျေးပေါသောတက္ကသိုလ်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျသူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ဝန်ခံချက်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏
လျှောက်ထားသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ဝန်ခံချက်အေဂျင်စီများမှတဆင့်လျှောက်ထားဖြစ်စေ၏ရှေးခယျြမှုရှိသည်။ အင်တာနက်ကတဆင့်လျှောက်ထားစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်:
လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပုံစံဖြည့်ပါနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ upload တင်သင့်တယ်
လျှောက်ထားသူပုံစံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသို့မဟုတ်သူမအားလေကြောင်းလိုင်း (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်
လျှောက်ထားကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိထားပြီးနောက်သူတို့ဗီဇာ processing စတင်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျောင်းကနေဗီဇာဗူးတောင်းသင့်တယ်
သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပါ သင်မည်သည့်အဆင့်များ၌မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုအကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဖုန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ရန်။
တောင်အာဖရိကရှိ Public FET ကောလိပ်များ၏စာရင်း
ပူးပေါင်းအရာရှိ at Study Abroad Nations | ကျွန်ုပ်၏ အခြားဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။
Study Abroad Nationsကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျောင်းသား သန်းပေါင်းများစွာကို ကူညီပေးခဲ့သည့် လမ်းညွှန်ရာနှင့်ချီ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ရေးသားထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလပ်ဖောင်းများ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတဆင့် အချိန်မရွေး သင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းကာစီနိုများအတွက် ဤအကြံဥာဏ်များနှင့် လျှို့ဝှက်ချက်အသစ်များသည် 2022 ခုနှစ်အတွက် သိထားသင့်သည်။
Counseling in Graduate Degree ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
စာစီစာကုံးတွင် ကိုးကားရေးသားနည်း- ကျောင်းသားများအတွက် အတိုချုံးလမ်းညွှန်
Previous post:ကနေဒါနိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ထိပ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း ၁၀ ကျောင်း
Next Post:18 Stanford လက်မှတ်များနှင့်အတူအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
မေလ 17, 2021 မှာ 5: 56 ညနေ
အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါက 0622762092 သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ
နိုဝင်ဘာလ 28, 2020 မှာ 1: 21 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 မှာ 4: 46 နံနက်
ကြိုးစား Writix မှစာစီစာကုံး ၀ န်ဆောင်မှု ယူကေ၏ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီကိုရယူရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုကြေးနန်းအဖွဲ့ (ဆွေးနွေးချက်ဖွင့်ထားသည်)
ငါတို့ Join နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု WhatsApp Group မှ ၂ (ဆွေးနွေးချက်မဖွင့်ပါ)